Maleeshiyaadka Shabaab oo sheegay in Saalax Badbaado uu fuliyay qaraxyadi shalay ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
27th July 2016 A warsame Af Soomaali 0
Idaacadda Andalus ee ku hadasha afka maleeshiyaadka Shabaab ayaa baahisay in qaraxyadii shalay ka dhacay nawaaxiga garoonka Aadan Cadde uu fuliyay Ex-xildhibaan Saalax Badbaado oo horay uga tirsanaa Baarlamaankii KMG ahaa ee Somalia isagoo u galay maleeshiyaadka Shabaab sanadkii sanadkii 2010-ki .
Farriin cod ah oo maleeshiyaadka Shabaab ay ka duubeen dhagarqabe Saalax Badbaado ka hor inta uusan fulin qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho ayeey baahisay Idaacada A-Andalus ee ku hadasha afka argagixisada Shabaab.
Naftii hallige Saalax Badbaadow ayaa fariinta uu duubay ku sheegay in uu fulinayo weeraradii shalay ka dhacay Muqdisho, isagoo dardaaran u diray maleeshiyaadka Shabaab.
Dhagar qabahan ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed ee dega gobolada waqooyi ee Somaliland iney taageeraan maleeshiyaadka Shabaab, taasoo muujineysa sida dhagarqabahu ugu fogaaday afkaarta qaldan ee xagjirnimada ah oo ku kaliftay in uu shalay isku qarxiyo dad abriya ah oo an waxba galabsan.
Naftii hallige Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Badbaado) oo ka mid ahaa Baarlamaankii KMG ee dowladii uu madaxweynaha ka ahaa mudane Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa u goostay maleeshiyaadka shabaab sanadkii 2010-ki tan iyo xiligaasna hadalkiisa lama maqal.
Intii maqashay ismiidaaminti dhaqarqabe Saalax Badbaado ayaa maag gacmaha madaxa saaray, waxeyna tani noqotay arrinta ugu hadalheyska badan ee hareeysay baraha bulshada.
cumar cilmi badbaado
cumar nuux babaado
omar nuuh badbaad
Ciidamada NISA oo qabtay gaari lagu soo xiray walxaha qarxa+Sawirro